Ahoana ny fametrahana Microsoft Edge Browser
Hey any, misaotra ny miditra amin'ity lahatsoratra manazava ity, izay hampiseho anao ny fomba hanodinkodinana ny navigateur rafitra Microsoft. Microsoft Edge dia fomba tsotra sy mahazatra ahafahana miditra amin'ny aterineto, mahavariana maivana be, manome anao fahazoana fidirana amin'ny varavarankely 10 amin'ny pc sy ny windows 10 amin'ny finday, android apps, IOS ary na dia misy console na fitaovana Xbox One aza.
Ny milina fanoratana dia ao amin'ny IOS, EdgeHTML, ary Android, ao anatin'ireo fitaovana samihafa samihafa ireo izay fitaovana izay mahatonga azy io ho tena mahasoa anao amin'ny fidirana amin'ny pc na ny fitaovana Android na rafitra Operating amin'ny rehetra. Amin'ny ankapobeny, niditra tao amin'ny pc ny Microsoft Edge mba hanolo tanteraka ny Internet Explorer, ary ity farany ity ihany koa dia tsy manohana ny Windows 8, satria Windows 8 dia avy amin'ny rindrambaiko taloha, mila mila manavao amin'ny Windows 10 ianao mba hahazoany tombontsoa feno avy amin'ny browser-rindrina Microsoft.
Amin'izao fotoana izao raha te-hanilika amin'ny navigateur kilaometatra Microsoft ianao mankany amin'ny dikan-teny efa taloha, ny mpikaroka Internet izay mifanaraka amin'ny Windows 7 sy 8 ireo dingana etsy ambany dia hanampy anao hanao izany amim-pilaminana sy hahamaivana araka izay azo atao raha tsy manimba ny rafitra miasa. Amin'izao fotoana izao, ity dingana ity dia hiasa amin'ny ankapobeny ny dikan-tsoratry ny Internet Explorer izay nampiasainao ara-dalàna.
Noho izany, fotoana hifindrana amin'ny ampahany mahafinaritra izay ambarako anao ny fomba hanodinkodinanao ny navigateur kilaometatra Microsoft.
Ahoana no hanaparitahana ny navigateur rafitra Microsoft
Miangavy ahy, fa ny pc dia tsy miatrika ny rafitra Microsoft rafitra farany indrindra, noho izany ny fanazavana sasany izay omeko anao dia tsy maintsy manaraka azy ireo amim-pitandremana mba hampitsahatra ny fampiasana ny navigateur Microsoft ankehitriny.
1. Atsaharo ny mpikaroka amin'ny aterineto amin'izao fotoana izao amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso fotsiny ny rafitra fanaraha-maso. Raha te hiditra amin'ny piraofilin'ny solosaina ao amin'ny solosainao ianao, ary amin'izay azonao atao ny mandefa windows. Ho an'ny Windows 10, tsindrio ary tano ny tabilao Windows ary tsindrio 'S' mba hikaroka, raha ny an'ny Windows 8 dia tsindrio ary asio ny takelaka fikandrana ary hijery ny fikandrana fichier azafady, ary ny Windows 7 sy etsy ambany dia tsindrio fotsiny ny tabilao Windows ary apetraho ao 'takelaka fikirakirana'.
2. Ankehitriny, rehefa tsy maintsy nosokafana ny efijery fanehoan-trano ianao dia tsindrio 'Programa sy Feo' na raha manana PC ny anao 'Programs' tsindrio eo, dia mitovy daholo.
3. In 'Programa sy Feo' find and click on 'Asio varavarankely ny varavarana Windows' mba hiditra amin'ny efijery windows.
4. Rehefa any amin'ny 'Windows features' screen, tsindrio ny 'Internet Explorer 11' tsindrio eo amin'ny boaty eo an-toerana eo anoloany mba hanokafana boaty dialogue.
Kitiho ny eny mba hanohy, araho ny torolàlana ary miandrasa azy hamita ny fanovana ilaina.
5. Ankehitriny, miverena any amin'ny 'Programa sy endri-javatra' Ao amin'ny tolotra fanaraha-maso, tadiavo ary tsindrio 'Hizaha ny updates farany'. Eto amin'ity sehatra vaovao ity no hitadiavana 'Internet Explorer' ao anatin'ny lisitr'ireo zavatra voapetraka. Tsindrio eo izany na raha tsy mahomby dia tsindrio eo amin'ny 'esory ' bokotra Dialogue pour pop up, clicking on uninstall and then clicking 'Eny ' hanamafy sy hanohy ny fanesorana.
6. Ho elaela vao ho vita izany, ka manàna faharetana. Aorian'izany, ny solosainao dia hanosika anao 'Manomboha anio' or 'Atsaharo aty aoriana'. Aza manahy, tsindrio 'Manomboha anio' mba hameno sy hampihatra ireo fanovana rehetra nataonao.
7. Rehefa vita izany rehetra izany, azonao atao izao ny mankafy ny dikan-ny Internet Explorer izay resahanao miaraka, mba hisorohana ny fanavaozam-baovao hafa mety hipoitra na automatique, raha tsy misy ny famoahana anao? Sokafy tsotra izao ny Internet Explorer ary tsindrio ny 'Fikirana' icon eo an-tampony havanana amin'ny efijery mpikaroka, ary tsindrio midina ary tsindrio 'Momba ny Internet Explorer'. Tsindrio fotsiny 'Mametraka dikan-teny vaovao automatique' ary hisy famandrihana hafa hijanona tsy tapaka mandra-pilazanao izany.
Izany dia mora, mety mitaky ny fotoanao izany, saingy miasa izany ary fiarovana 100 ho an'ny PC ianao.
Ny zavatra rehetra lazaina, dia mahatonga anao ho mora kokoa amin'ny fampihenana ny navigateur kilaometatra Microsoft tsy misy fiatrehana na tahotra ny mandratra ny PC amin'ny fomba rehetra. Noho ny fanampian'ny screenshots, azoko antoka fa azonao ny fanantonana azy rehetra. Miala tsiny aho amin'ny dingana izay tsy nipoahan'ireo screenshotsa, satria noho izaho efa nanaparitaka ny navigateur mpikirakira Microsoft aho ary tena tsy te-hanomboka ny dingan'ny fampivoarana izany rehetra izany aho.
Ireo dingana etsy ambony dia tena mazava sy mora azo, sy manaraka azy ireo tsara ary hahomby amin'ny fampihenana ny navigateur Microsoft rindrina amin'ny PC ianao. Misaotra betsaka noho ny mitazona manodidina, mandra-pahatongan'ny fotoana manaraka, jereo ya.
Raha sendra olana ianao manandrana manodina ny browser-n'i Microsoft, dia azonao atao ny mampiasa ny pejin'ny fanamarihana ary hiverina any aminao.
Arovy ny fiainanao manokana amin'ny Windows 10 amin'ny ShutUp10
Ny Windows 10 Anniversary Update (Version 1607) RS1 sy RS2 ny fifanakalozan-kevitra
Ahoana ny fampiasana ny Dika Microsoft Builder amin'ny Windows 10
Windows 10 manangana sary 14901 ISO
Ahoana no hanatsarana ny fifandraisana LTE ao amin'ny Windows 10 amin'ny cX NetAdapter
Ahoana ny fomba hanamboarana Windows 10 Apps
Tags:manambany Microsoft sisiny pirinty Microsoft Edge Windows 10
04 GNOME Users Android Database fikarohana Apache hametraka ram fitaovana finday PPA API rafitra ubuntu 15.04 Apple Watch 'App famotsorana fanamarinana tahirin-kevitra Windows 10 Performance SSD Linux Windows 8 CentOS bilaogy CentOS 7 Video Debian HTML Twitter Linux Ubuntu Systems fitaovana HTTP Google Bing PHP takelaka fikirakirana Ubuntu 14.04 lalao MAMAKA USB HTTPS Phone Malagasy Bible nbsp vaovao farany fitaovana Command Nginx Apps web browser Windows Phone toe-tsaina SEO One ' iPhone Unix rindrambaiko lalao WordPress Windows Firefox fifamoivoizana Rafitra fikirakirana Screen Facebook taona Support bilaogy paoma Server Ubuntu 16 IP adiresy Samsung Galaxy "PC afa-po File Microsoft Cortana Up " windows update OS X Linux Mint Chrome MySQL web server Fitaovana finday Time finday avo lenta command line Microsoft Windows YouTube Plugins Samsung Company Plugin endri-javatra haino aman-jery sosialy Ubuntu 14.10 famerenana app store loharano misokatra Ubuntu Unité centrale raki-daza 10 PDG SSH Toetoetra fitaovana